ICyberneticos, inkonzo enkulu yokubamba-iGeofumadas
I-Cybernetics, inkonzo enkulu yokubamba
Matshi, 2012 Internet kunye neBlogs
Namhlanje zininzi iinkonzo zokubamba simahla, ezinje ngeWordPress.com kunye neGoogle Blogger ebizwa ngokuba yiGoogle Blogs.
Kodwa ngokuhamba kwexesha, iisayithi ezikhulileyo kunye neenkampani zifuna inkonzo eqinisekisa ukhuseleko kwixabiso loqoqosho kunye nequmrhu elimele ubukho kwi-Intanethi. Kananjalo koku kukho iindlela ezahlukeneyo; Kule meko ndifuna ukuthetha ngeCyberneticos, ke siza kugxila okungenani kwizinto ezintathu ezinomdla:
1. I-Instalatron, ngaphezu kwee-60 zeenkonzo zewebhu.
Mhlawumbi oku kokona kulungileyo kuba oku akukho ngale ndlela kwabanye ababoneleli. Ngaphandle kokwenza iinkqubo ezizodwa, iphaneli yoLawulo ngokuthe ngqo ibandakanya ukufakela izicelo ezinje:
I-Galery, yokudityaniswa kwemixholo kunye nenkonzo yemifanekiso
I-WordPress, iJoomla kunye neDupal, yolawulo lwewebhusayithi okanye umxholo webhlog
I-DokuWiki kunye neMedia Wiki, ngale nto unganyusa umxholo kwifomathi yokusebenzisana
Umgangatho oPhezulu, incwadi yeNdwendwe kunye neFom yoQhakamshelwano, iKhalenda yeFlat, ukongeza ii-plugins ezinika ukusebenza okwongezelelweyo kwindawo
I-OpenX, le yenye yeeseva ezisetyenziswa kakhulu kwintengiso namhlanje
I-Moodle, ukukhonza iikhosi ze-intanethi kunye neekhampasi ezibonakalayo
I-PHPBB, ukuseta iiforamu
Ezi zi-12 kuphela, kodwa xa zidityanisiwe zingaphezulu kwe-60 iinkqubo ezinika iCyberneticos ixabiso elongeziweyo, njengoko benditshilo ngaphambili, abanye ababoneleli. Ayisiyo yokuba abanye abayixhasi, kodwa ngokubanzi kuya kufuneka usebenze kufakelo ngaphandle kwaye bahlala kwinqanaba eliphezulu lokulawula.
2. Ukuya kuthi ga kwiiplani ezi-5 ezinokuchaphazeleka.
Kwindawo encinci kukho izicwangciso ze-5 GB yezithuthi ukusuka kwi-4.33 yeeYuro ngenyanga, zonke iinkonzo zibandakanyiwe kunye nokukhetha ukuba ngaphezulu kwesizinda esinye kwiakhawunti efanayo. Umahluko osisiseko kwizicwangciso ukwindawo yokugcina kunye nobubanzi bebhendi yokugcwala:
Ukusingatha ubuqu, i-5 GB yendawo, i-10 GB yezithuthi. 6.09 IiYurophu
Ukusingathwa okuphakathi, i-2 GB yendawo, i-20 GB yezithuthi. I-13.20 i-euro
Ngokufanayo zimbini ezinye izicwangciso kunye nenqanaba elilandelayo ngokukhetha ukuSasaza ukuseta iisayithi zohlobo lukanomathotholo okanye umjelo weTV.
3. Isilingo sasimahla seentsuku ezili-15.
Kuba ngubani ofuna multidomain engapheliyo yokubamba Kwaye ngubani ofuna ukuqiniseka ukuba oko kubonelelwa yiCyberneticos kuyinyani, kukho ithuba lokuyisebenzisa kwiintsuku ze-15.
Ke ukuba ujonga ukuseta iwebhusayithi okanye ukutshintsha ababoneleli, olu khetho.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iindaba ze-4 ezivela kwiGoogle Earth 6.3
Post Next I-ESRI isungula ushicilelo oluthile ukwenza i-GIS ifikeleleke ngakumbi kubafundi baseyunivesithiOkulandelayo »
I-6 iphendula i- "Cyberneticos, inkonzo enkulu yokubamba"
paul okencrease uthi:
icetyiswe i-100%. Banika eyona nkonzo ndiyaziyo. Ukuba ufuna ukubamba iwebhusayithi ebalulekileyo apho unabaxumi kunye nezinto ezinzulu ndibacebisa. Ihostele zininzi, kodwa zibanzi, kwaye zingabinakho ukuthembeka kwaye zikhuselekile zimbalwa njenge-cybernetics.
david suarez uthi:
Ndasasaza irediyo yam kwi-intanethi kunye nabo. ICentrova cast isebenza kakuhle. i-salu2
Banqongophele ezo ze-1and1 miweb, kodwa ayintoyonto. Inyani kukuba i-cybernetics inzulu kwaye iinkonzo zihamba ngaphaya komhleli olula. baxabisekile!
I-javier vincent uthi:
Ndikunye nabo kwaye phantse unyaka. Phosa kakuhle. Banobuhlobo kwaye banika inkxaso elungileyo yamaxesha e-2-3 endifuna uncedo kunye nesifakelo. Kucetyiswa ukuba i-100%